रोल्पाका शनि बने पहिलो नेपाल लोकस्टार - Pardeshi Khabar
यस्तै आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालले लोकसंगीतले सबैको हृृदयलाई छुने बताए। समारोहमा लिटमस केबलका उपाध्यक्ष सरोजकुमार मिश्र, लोकस्टारका सीईओ सुरज गिरी, चाहना मिडियाका अध्यक्ष सहदेव कोइराला, हेमराज ढकाल, सरोजकुमार मिश्र, सहदेव कोइराला, सुदीप आचार्य, प्रदीप रोका, सञ्जय संघाई, रोहित गुप्ता, आदित्य संघाईलगायत सहभागी थिए।
रोल्पाली ठिटो शनि विश्वकर्माले लोकस्टारमा ‘सुमधुर स्वरका धनी’ टाइटल प्राप्त गरेका छन्। उनी माउन्ट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल दाङमा कक्षा १२ अध्ययनरत छन्। उनका ठूलोबुबा पनि गीत गाउँछन्। उनकै संगतले गर्दा पनि शनिमा गीतको धुन गढ्यो। गोठालो जाँदा होस् या मेलापात गर्दा शनिकै गीत गाउँथे। संगीतमै लाग्छु भन्ने थियो उनलाई, अग्रजले पनि यही सुझाउँथे। यसका लागि कक्षा ८ पढ्न रोल्पा सदरमुकाम गए। त्यहाँ दुई वर्ष पढे। एसएलसी सकाएर दाङ झरे। दाङमा महोत्सव लागेको थियो। राष्ट्रिय स्तरका कलाकारसँग गीत गाउने मौका पाए उनले।
यसपछि उनको स्वरको चर्चा हुन थाल्यो। सांगीतिक कार्यक्रममा निम्तिन थाले। उनी खुब गीत सुन्थे, तर गायक, संगीतकार कोही चिन्दैनथे। बुटवल अडिसनमा उनले ‘तिरिरी मुरली बज्यो…’ बोलको गीत गाएर निर्णायकको मन जिते। १८ वर्षे शनि गोल्डेन माइक विजेता हुन्। यसले उनलाई थप जिम्मेवार बनायो। गोल्डेन माइकको इज्जत राख्न पनि उनले संगीत सिक्नै पर्ने भयो। उनी काठमाडौं आएर गुरु नरहरि प्रेमीसँग एकमहिने संगीत कक्षा लिए। लोकस्टारमा सहभागीमध्ये सबैभन्दा कान्छा उमेरका शनि लजालु स्वभावका छन्।
स्याङ्जा सिर्सेकोटका चेतन लोकस्टारका ‘रकिङ स्टार’ हुन्। चेतन राजु परियार, बिमाकुमारी दुरा, भगवान भण्डारी, पुरुषोत्तम न्यौपानेका गीत सुनेर हुर्किएका हुन्। उनको बाबा, दिदी र दाइ पनि मौलिक गीत गाउँछन्। भन्छन्, ‘निकै मिठो ठेट भाका गुञ्जिन्थ्यो हाम्रो घरमा। कति गीत त अझैसम्म पनि रेकर्ड भाएका छैनन्।’ ठूलो परिवारमा जन्मेका गोतामे पेट पाल्न कहिले मुम्बई त कहिले दिल्लीमा समेत मजदुरी गर्न पुगे। दिल्लीमा होटलमा काम गर्दा गर्दा पनि उनी लोकगीत गाइरहेका हुन्थे।
२०६६ सालमा एल्बम निकाल्न भनेर उनी काठमाडांै आए। रिलवाला क्यासेटमा विश्वास लाछैन बोलको गीत बजारमा ल्याए। भिडियो बनाउन भनेर कम्पनीलाई ३० हजार बुझाए तर कम्पनीले पैसा खाइदियो। गीतले पनि खासै चर्चा पाएन। उनी भन्छन्, ‘संगीतमा पलाउन लागेको कोपिला कम्पनीले निमोठिदियो।’
कलाकार बनेर पैसासँगै चर्चा कमाउन सहर छिरेका गोतामे घर न घाटका भए। गाउँ जाऊँ त ऋण तिर्न सकिएको छैन। सहरमा बसौं भने खाने बस्ने ठेगान छैन। सोह्रखुटेमा फर्निचरको काम पाए। काम गर्दै संगीत साधना गर्दै रहे। केही समयपछि दोहोरी साँझमा गीत गाउँदै एल्बम निकाल्दै गए।
उनले स्याङ्जालीको छोरो, विश्वास लाछैन, तिम्रो एउटा झुटलेलगायत दर्जनभन्दा बढी एल्बम निकालेका छन् भने एक सयभन्दा बढी लोकगीतमा स्वर भरेका छन्। भन्छन्, ‘माटोको गीत, स्थानीय संस्कृतिको धुन भरिएको गीत नै हरायो। संसारको कुनै पनि संगीतमा नभएको मिठास पाइन्छ लोकगीतमा। अचेलका लोकगीतमा खास मिठास भेटिँदैन।’
मौलिक गीतको खोजी गर्न प्रयासरत चेतन लोकस्टारमा सुरुदेखि नै खास मानिँदै आएका थिए। उनले हरेक गीतमा पर्फेक्ट गाउने अभ्यास गर्थे। चेतन दर्शकको माझमा चर्चा कमाएका प्रतियोगी हुन्।
उदयपुर कटारीका हुन् विनोद दनुवार। उनी गीत गाउने रहर पूरा गर्न काठमाडांै आए। काठमाडांैमा कोही आफ्ना थिएनन्। पनौतीमा आफन्तकहाँ बसेर कर्मस पढे।
उनको सांगीतिक लगाव भने बच्चैदेखिको हो। स्कुलको कार्यक्रम, गोठालो जाँदा र वनपाखामा गीत गाएरै उनको बाल्यकाल बित्यो। यम बराल, रामचन्द्र काफ्ले, दीप श्रेष्ठका गीत सुनेर हुर्किएका विनोद लोकसंगीतमै केही गर्न चाहन्छन्।
उनले पनौतीमै सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठसँग केही समय शास्त्रीय संगीत सिके। स्कुल कलेजमा स्टेज कार्यक्रममा गीत गाउँथे। गायक बन्न काठमाडांै छिरेका दनुवारले निर्दोष नामक एल्बम निकाले। एल्बमले खासै चर्चा पाएन। लगानी डुब्यो। पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। पैसा कमाउन चार वर्षअघि विदेश गए।
‘बर्मा गए पनि कर्मसँगै’ भनेजस्तै एजेन्टको फन्दामा परेर खासै पैसा कमाउन सकेनन्। संगीतमै केही गर्छु भनेर नेपाल फर्किए। आरआर कलेजमा संगीत विषय लिएर पढ्न थाले। कलेजले आयोजना गरेको आरआर आइडल विजेता भए। लोकस्टारमा आएपछि मात्रै उनले आफ्नो क्षमता चिने। संगीतका हस्तीसँग भेट्ने मौका पाए।
दनुवार जाति गीतसंगीतमा निकै कम सक्रिय देखिन्छन्। यही समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै विनोदले लोकस्टारमा निरन्तर आफूलाई टल्काउने काम गरे।
रामेछाप मन्थलीका रैथाने हुन् रामकुमार नेपाली। २०६१ सालदेखि उनी लोकसंगीतमा लागेका हुन्। ललितकला क्याम्पस भोटाहिटीमा उनले डिप्लोमा इन म्युजिक विषयमा ४ वर्ष औपचारिक अध्ययन गरे। रामेछापदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा उनको सहज भने पक्कै थिएन। कलाकार बन्ने रहरले उनलाई कहिले घर बनाउने मिस्त्री बनायो त कहिले मजदुर। तर पनि लोकगीत गाउने हुटहुटीले छोडेन।
काठमाडौं अडिसनमा गोल्डेन माइक जितेर उनले लोकस्टारमा सानदार प्रवेश पाएका थिए। उनका बुवाआमाले लुगा सिलाउने पुख्र्यौली पेसा गर्दै आएका छन्। भात खान दसंै पर्खनुपथ्र्यो। तर पनि बुवाले धानेको पुख्र्यौली पेसा अपनाउन उनलाई मन लागेन। गीत गाउन छाडेनन्। भन्छन्, ‘मेरो शरीरमै लोकगीत बगिरहन्छ त म अरू पेसा खोज्न कहाँ जाऊँ ? ’
उनका मेरी आमा, चौबन्दीको फुर्का, दुई रुपैयाँको बिँडी लगायत डेढ दर्जन एल्बम छन्। करिब तीन लोकगीतमा स्वर दिइसकेका छन्। तर उनका गीतले खासै चर्चा पाउन सकेको थिएनन्। घरबाट खासै सहयोग पाउँदैनथे। २०६६ सालमा रामेछाप लोकतारामा पहिलो स्थान जितेपछि उनको बाबाको मन फेरियो। एल्बम निकाल्न सकेको आर्थिक सहयोग गर्न थाले।
बन्द कोठामा मादल र किबोर्ड चलाउँदै रियाज गरिरहने रामकुमार सानो साथी सर्कलमा मात्रै सीमित थिए। उनी हुर्केको समाजमा सालैजो, टप्पा, कौडा, देउडा, हाक्पारे सबै खालका भाका गाइन्छ। उनलाई लोकगीतका सबै भाका प्यारो लाग्छ। किन त ? भन्छन्, ‘लोक भनेकै माटोको गीत। चाहे सुदूरको गीत होस् या मधेसको ताल होस्। लोकगीत आमाको माया जस्तो लाग्छ। लोकगीतमा आफू हुर्केको माटोको गन्ध आउँछ। नेपालीपनको मिठास आँउछ।’
रामकुमारले लोकस्टारमा सुरुदेखि नै दर्शक र निर्णायकको मन जित्दै आएका थिए। उनी गीत गाउन होस या संगीत भर्न या अभिनय गर्न नै किन नहोस् अथवा धमाकेदार प्रस्तुति दिन आफूलाई निकै अब्बल साबित गरेका थिए। कार्यक्रम अवधिभर धेरै पटक उनको आवाज र प्रस्तुतिले वाहवाह कमाउन सफल भयो। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले प्रकाशित गरेका छन ।
« आलमलाई जोगाउने को-को ? (Previous News)
(Next News) यापर भिटेन रिहा भए »